Farmaajo oo hal sabab darteed u diiday inuu xiriirka u jaro dowlada Qadar | Entertainment and News Site
Home » News » Farmaajo oo hal sabab darteed u diiday inuu xiriirka u jaro dowlada Qadar
Farmaajo oo hal sabab darteed u diiday inuu xiriirka u jaro dowlada Qadar
daajis.com:- Madaxweynaha Somalia Maxamed C/llahi Farmaajo ayaa ku adkeystay inaanu Iclaamin doonin in dowladiisa ay xiriirka diblumaasi u jartay dowlada Qatar, xilli uu la kulmayo cadaadis xooggan.
Madaxweyne Farmaajo ayaa Boqorka dalka Sacuudiga iyo Wasiirka arrimaha dibadda dalkaasi u sheegay in Somalia aysan awoodi karin in xiligaani ay calaaqaadka u jarto Qatar, kuna biirto xiisadda ka aloolsan gacanka carbeed.
Farmaajo waxa uu ku andacooday in Somalia ay iminka gashay jawi nabadeed, sidaa darteed aanu suuragal aheyn inay dhexda ka galaan xiisada dowladaha Khaliijka, ayna abuurtaan cadowtooyo cusub.
Waxa uu ku adkeystay in Mowqifka Somalia uu yahay inay dhex dhexaad ka tahay xiisada u dhexeysa Sacuudiga iyo Qatar, iyadoo la eegaayo danaha Soomaalida, islamarkaana aysan jirin sabab uu dal aan waxba ka galabsan ula galo dagala siyaasadeed.
Madaxweynaha ayaa la sheegay in dowlada Qatar uu u difaacay hal arrin oo muhiim uu u arko, taasi oo ah:-
1 – Farmaajo waxa uu aaminsan yahay in Soomaaliya ay tahay dal madax banaan, oo aysan ahayn in siyaasadeeda arrimaha dibedda ay u meeriyaan dalal kale, sidaa darteedna ma aqbalayo cadaadiska dalalka carbeed.
Madaxweynaha ayaa rumeysan in haddii uu xiriirka ugu jaro Qatar cadaadiska Sacuudiga iyo Imaaraadka, in taas macnaheedu yahay in Somalia aysan u madax banaaneyn arrimaheeda gudaha.
Dhinaca kale dowladda Qatar ayaa waxay aad isugu dhow yihiin agaasimaha guud ee Xarunta Villa Somalia Fahad Yaasiin, oo horey u ahaa weriye ka tirsan TV-ga Aljazeera, oo Qatar ay leedahay.